Tag Archive for "price increase" - संकटमा फ्रान्स, आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी !
संकटमा फ्रान्स, आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी !
काठमाडौं । फ्रान्समा इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध सवारीधनीहरूले सडक प्रदर्शन गर्ने क्रममा भएको सडक दुर्घटनामा परी कम्तीमा एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । दक्षिणी फ्रान्सको अर्लिसमा सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा १० किलोमिटर सडक अवरूद्ध गर्ने क्रममा एउटा भ्यान र ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाँदा भ्यानका चालकको मृत्यु भएको टारास्कनका अभियोजनकर्ता प्याट्रिक देशजार्डिनले समाच... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । डलरको भाउ बढेको कारण व्यापारीले विदेशबाट आयात गर्ने सामानमाको भाउ बढेको दाबी गरेका छन् । थोक व्यापारीले आफूखुशी मूल्यवृद्धि गरेपछि बाजारभाउ नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । दशैंको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ बढाएका छन् । यसले दसैंमा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाएको छ । भान्सामा उपभोग हुने धेरै वस्तुमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। हरियो तरकारीदेखि फलफूलसम्म, चामलदेखि खानेतेलस... थप पढ्नुहोस्